Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao baolina kitra frantsay Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny sariitatry ny baolina kitra mitondra ny anarana hoe "Lenglet". Ny Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga miavaka hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Clement Lenglet Childhood Tantara- Ny fandalinana hatramin'ny daty. Ny trosa FC Barcelona ary ny alchetron
Ny famakafakana dia ahitana ny fiainany voalohany, ny fiainam-pianakaviana, ny fanabeazana / fananganana asa, ny fiainana voalohany, ny lalana mankany amin'ny tantaran'ny laza, mitombo ny tantara malaza, ny fifandraisana, ny fiainany manokana, ny fomba fiaina sy ny fiainam-pianakaviana sns.
Eny, fantatry ny rehetra fa prospecte lavitra izy ho an'ny FC Barcelona, ​​mpiaro izay mahavita miatrika mpanafika ara-batana. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny biolojia Clement Lenglet izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Hanomboka, ny anarany feno dia i Clement Nicolas Laurent Lenglet. Clement dia teraka tamin'ny andro 17 ny volana jona 1995 tamin'ny rainy Sébastien sy ny reniny izay tsy fantatra ny tanànan'i Beauvais, France.
Ny fianakavian'i Clement Lenglet dia Beauvaisiens ary manana ny fiaviany avy any Beauvais. Ity dia tanàna iray any avaratra France izay eo ho eo any amin'ny 75 kilometatra miala an'i Paris. Beauvais no fonenan'i Katedraly Beauvais, iray amin'ny katedraly faran'izay tsara tarehy indrindra eran-tany miaraka amin'ny arsité Gothic (fomba iray niroborobo tany Eropa tamin'ny vanim-potoana antitra sy tamin'ny fararano antitra).
Clement Lenglet Fiainana ara-pianakaviana - avy ao Beauvais, tanàna malaza amin'ny katedraly azy izy. Ny trosa amin'ny RailEurope
Clement Lenglet dia nobeazina tao amin'ny tranon'ny fianakaviana kristianina antokon'olona. Izy dia zaza voalohany teo amin'ireo mpiray tam-po 3 hafa (sary eto ambany) nateraky ny ray aman-dreniny. Nihalehibe niaraka tamin'ny zandriny roa avy eo i Clement izay tsy mitovy firy amin'ny taonany.
Young Clément Lenglet dia naka sary niaraka tamin'ireo rahalahiny. Ny trosa Boursorama
Rehefa mitsara amin'ny sary ianao, dia ho hitanao fa izy mirahalahy telo taty aoriana dia nanana anadahy zaza izay fantatra fa zaza amin'ny fianakavian'i Lenglet.
Tany am-piandohan'ny mbola kely dia nalain'ny fianakaviany Sebastian Lenglet ny fianakaviany hiala ny tanànany any Beauvais mba hody. mipetraka ao Jouy-sous-Thelle, kaominina ao amin'ny departemantan'i Oise any avaratr'i Frantsa. Tao amin'ny Jouy-sous-Thelle Clement no naka ny fahalianana amin'ny baolina kitra.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Raha mbola kely dia manana tanjona i Clement ho tonga mpilalao baolina matihanina. Hafa noho ny ankizy hafa tany izy Jouy-sous-Thelle izay nanana filana mitovy. Ny nahatonga azy tsy nitovy dia ny fahitany an'izany tanjona izany ho fanombohan'ny tolona. Raha tokony handeha hijery ny namany na hifikitra amin'ny PS (PlayStation) i Lenglet dia aleony ihany ao an-jaridaina miaraka amin'ny rainy sy ny dadatoany. Izy ireo no mpanazatra voalohany.
Nanana mpilalao baolina kitra taloha ho an'ny dadany dia mora tamin'i Clement Lenglet ny fahazoana ny fanampiana rehetra ilaina amin'ny fametrahana ny fototry ny asany. Avy lavitra teo amin'ny zaridainam-bolan'ny fianakaviany, Clement Lenglet izay efa-taona tamin'izany fotoana izany dia nanomboka nifaninana tamin'ny ankizy fito taona. Nomena azy ny laharana 10 nomerao satria izy talenta kokoa noho ny hafa na dia kely indrindra aza.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Herintaona aty aoriana rehefa feno 5 izy, dia nanomboka niatrika fitsarana tao amin'ny oniversite baolina kitra teo akaikiny i Lenglet. Vitan'izy ireo soa aman-tsara ny fitsapana niaraka tamin'i Montchevreuil FC, fikambanana kely iray izay hita ao amin'ny kaominina frantsay any Oise akaikin'ny fianakaviany. Ny maha akaiky azy dia ny antony namelan'ny ray aman-dreniny niditra ho mpikambana tao amin'ny fikambanana.
Fantatr'i Clement ny zavatra tadiaviny avy hatrany nanomboka tamin'ny nidirany tao Montchevreuil araka ny nambaran'ny iray tamin'ireo namana mbola kely, Matthieu Quesmel izay niara-nilalao tao amin'ny klioba (2001-2007). Anisan'ireo ankizy hafa nomena ny soatoavin'ny filalaovana baolina kitra ilaina ho azy ireo hanombohana ny diarin'ny asany izy.
Clement Lenglet Tany am-pitiavana niaraka tamin'ny mpilalao baolina kitra- Eto, hiara-miasa amin'ireo mpilalao tanora namany izy. Ny trosa amin'ny IG
Ny fahatapahan'i Clement Lenglet hahomby dia nahita azy niditra tamin'ny klioba hafa antsoina hoe Chantilly. Akademia iray izay nahazo laza momba ny fampiofanana sy ny fampahafantarana talenta tanora any Frantsa. Rehefa niditra i Lenglet dia nahatsikaritra ny fananan'ny fikambanana Kevin Gamero ao amin'ny kintan'ny kintan'ireo boky nosoratany.
Ny mpanazatra tanora an'i Lenglet tany Chantilly, Sylvain Dorard dia nanova azy ho eo ankavia raha vao tonga tany amin'ny klioba izy. Roa taona taty aoriana, dia niova fo izy, tamin'ity indray mitoraka ity ho mpiaro foibe. Clement Lenglet dia nanomboka nanaraka ny dian-tongotr'i Kevin Gameiro. Nanampy ny ekipany izy tamin'ny voalohany handresy ny amboara voalohany.
Clement Lenglet no sary teo akaikin'ny mpiambina azy ary nahazo tifitra am-piadiana. Ny trosa amin'ny IG
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Road to Fame Story
Hatramin'ny taorian'ny amboarany voalohany, Clement Lenglet dia nanomboka nandinika ny faniriany ho asany. Taorian'ny nampidiriny ny tropiany voalohany tao amin'ny CV, dia nanomboka nino izy fa hanao izany. Ny dadan'i Lenglet tsy navela handatsaka sorona mba hiantohany ny fahombiazan'ny zanany lahy. Clement indray mandeha nilaza momba ny fidiran-drainy tamin'ny asany;
"Indraindray ny raiko dia nanao ny fitsangatsanganana 3 miverin-dàlana mandritra ny herinandro eo anelanelan'i Chantilly sy ny fianakaviako mba hampianatra ahy amin'ny fiofanana, ary koa ny lalao amin'ny faran'ny herinandro."
Fantatr'i Clement fa mba hahatrarana fahombiazana dia ilaina ny hananana kalitao ara-teknika amin'ny lalaony ary arahin'ny vintana kely. Fantany koa fa mila fotoana avy amina recruiters avy amin'ny klioba lehibe sy lehibe indrindra izy ireo, fa tsy handratra. Ireo no teny fiambenany izay nandoa vola.
Tany Chantilly, nisy tokoa ireo tonga mpandray mpiasa teo amin'ny sisin-tany izay nijery ireo mpilalao tsara indrindra ary i Lenglet dia isan'ireo nijery azy. Tamin'ny taona 15, izy dia efa hitan'ny scouts avy any Nancy, fikambanana izay nilalao ny ekipa zokiolona ao amin'ny frantsay Ligue 1. Clement Lenglet dia nahazo ny fahombiazan'ny fikambanana.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Mitsangàna amin'ny tantara
Nanomboka nilalao baolina matotra niaraka tamin'i Nancy i Lenglet tamin'ny fotoana niakan'ny klioba an'i Ligue 2. Fantatrao ve?… Nihalehibe tamin'ny alàlan'ny laharam-pahamehana ambony indrindra izy ary lasa kapitenin'ny dingana. Amin'ny maha mpitarika azy, dia nanampy ny fikambanana izy tamin'ny fandresena azy io dia ny tropy Ligue 2.
Clement Lenglet indray mandeha dia nanampy ny mpiara-miasa taminy handresy an'i Ligue 2. Ny trosa amin'ny Estrepublicain sy Youtube
Ny fitarihana ny klioba nahazoany ny tropy tranainy voalohany dia nahita i Lenglet nahazo ny firaketana ho lasa mpilalao tanora indrindra indrindra tao amin'ny League 2 Best XI. Izy io no nahatonga azy ho lasa mpiambina ireo klioba lehibe eropeana izay anisan'i Sevilla.
Tamin'ny 4 Janoary 2017 dia nifindra tany Sevilla FC i Lenglet izay nanohy namirapiratra hatrany. Fantatrao ve?… Tafiditra tao amin'ny lafiny Sevilla izy izay nitazona takelaka madio tamin'ny fahareseny an'i Man United tamin'ny lalao 2017-2018 Champions League tamin'ny lalao 16 voalohany. Clement Lenglet dia nanampy tamin'ny fanerena amin'ny lohatenin'ny Ligala Europa any Seville ao 2017.
Fantatrao ve?… Ny fampisehoan'i Lenglet dia nahatonga an'i ESPN FC nametraka azy ho Tompondaka League XI tsara indrindra ho an'ny vanim-potoana 2017 / 2018. Ity seho ity ihany koa dia nahiratra an'i FC Barcelona izay nampiditra azy ho laharam-pahamehany ao amin'ny varavarankelin'ny famindrana ririnina 2018.
Clement Lenglet dia lasa mpilalao 22nd frantsay tamin'ny tantara mba hitafy ny loko loko an'i Barça. Ny ratra nahazo an'i Vermaelen sy Umtiti Nanome fotoana an'i Lenglet hametraka fitoriana ho amin'ny toeran'ny fiarovana Barca afovoany Gerard Pique. Tahaka ny amin'ny fotoana nanoratana, dia heverina ho toy ny fahatsinjovana maharitra ho an'i FC Barcelona sy ny ekipan'ny baolina kitra frantsay izy. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Relationship Life
Ao ambadiky ny mpilalao baolina mahomby dia misy sipa manintona eo amin'ny olona tsara tarehy Estelle. Mpankafy baolina kitra maro no mahatsapa ny fahitana fa ny fiarahana Interracial dia miha-mahazatra eo amin'ny mainty lahy mampiaraka ny sipa fotsy hoditra. Ny mifanohitra amin'izany anefa dia ny raharaha eo amin'i Estelle sy i Clement.
Hihaona amin'i Estelle- Clement Lenglets Girlfriend. Ny trosa amin'ny FC-Barcelona-Internationalcules
Ny tantaram-pitiavan'i Lenglet sy Estelle dia iray izay tsy afa-misaraka amin'ny mason'ny maso jerena fotsiny satria tsy misy drama ny fiainany. Samy tia a fifandraisana matanjaka izay miorina eo amin'ny fananganana mafy ary mifankatia fotsiny ary mifankatia.
Rehefa mitsara avy amin'ilay sary manakaiky etsy ambony ianao dia manaiky ianao fa ny mpilalao mahay toa an'i Clement dia mendrika karama tsara tarehy. Miaraka amin'ny fomba itondrany ny fifandraisan'izy ireo. azo antoka fa ny fanambadiana dia mety ho dingana manaraka ho an'ny vorona roa fitiavana.
Tena mifankatia i Clement sy ilay sakaizany Estelle. Ny trosa amin'ny mesqueunclubgr
Misaotra famaritana foko Clement sy ny sakaizany dia hijanona ho iray amin'ireo mpifankatia indrindra ao amin'i FC Barcelona sy ny ekipam-pirenena frantsay.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny fiainan'i Clement Lenglet dia hanampy anao hahita sary feno momba azy. Amin'ny fanombohana, i Lenglet dia olona mino fa tsy teraka ho mpandresy na mpandresy izy fa lasa nitombo.
Clement dia mpiasa mafy izay tsy mivoaka ary mihetsika tsy mitovy amin'ny mpiara-miasa aminy. Eric Abidal, talen'ny fanatanjahantena ao Barcelona tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana dia niaiky fa zara raha mahita karazana fitondran-tena toy izany avy amin'ny mpilalao hafa. Ny lalao baolina kitra no mamintina ny fiainany. Raha ny tsara indrindra, i Clement dia olona mieritreritra, mihinana ary matory baolina.
Mikasika ny fanamarihana manokana indray dia tia mandanja ny tenany isan'andro i Lenglet ary mitandrina be amin'ny fahadiovana azy, raha ny fihinanana azy, hoy i Sebastien rainy. Tian'i Clement hisakafo ao an-trano ary tsy mandeha any amin'ny trano fisakafoanana haingana.
Clement Lenglet- Tena mifantina amin'ny sakafony.
Farany, Clement dia olona tsy mahita an'i FC Barcelona no haavo ambony indrindra amin'ny asany. Fa izy kosa mahita ny fikambanana ho fahafahana hahita zavatra lehibe kokoa.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Fianakavian'i Clement Lenglet eo am-pijinjana ny tombony azo amin'ny fametrahana ny toe-tsaina mavesatra ao anaty azy ireo. Raha ny fitsidihan'ny rahalahiny matetika no mitsidika ary indraindray miara-mipetraka aminy any atsimo-andrefan'i Barcelona, ​​ny ray aman-drenin'i Lenglet dia nijanona bebe kokoa tany Jouy-sous-Thelle, France.
Mety ho sarotra ho an'ny mpilalao baolina kitra ny hiatrika fisotroan-dronono - saingy ny dadan'i Lenglet dia i Sebastein dia anisan'ireo nanana farafaharatsiny mba nanohy ny nofinofiny tamin'ny alàlan'ny zanany lahy. Raha naneho fanohanana betsaka tamin'ny alàlan'ny asany ny dadany, ny renin'i Lenglet dia miaina fiainana ambany milamina.
Noho ny fahombiazan'i Clement dia toa "Ny fianakaviany rehetra dia anaty rahona, ”Hoy ny hatsikana nataon'i Nathan Lenglet- iray amin'ireo zandriny. Tsy isalasalana fa nanjary modely ho an'ireo rahalahiny i Clement.
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - LifeStyle Facts
Ny fanapahana ny maha-azo ampiharina sy ny fahafinaretana dia tsy safidy sarotra ho an'i Clement Lenglet. Na dia fangatahana ilaina aza ny fitadiavam-bola, dia tsy hikarakara azy io i Lenglet, noho ny fahaizany mihazona ny vola ara-bola sy mandamina.
Ny fampisehoana fiara matanjaka, tranobe lehibe ary fitafy avy any ivelany dia azo antoka fa famantarana fa eo ambany fifehezana ny lafiny ara-bola amin'ny fiainany.
Clement Lenglet LifeStyle Facts. Ny trosa amin'ny IG
Clement Lenglet Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts - Untold Facts
FIVAVAHANA: Toa Claire Lenglet dia kristiana amin'ny finoana. Ny anarany eo afovoany Nicolas dia nanondro fa mety ho avy amin'ny fianakaviana katolika izay mety hivavaka ao amin'ny katedraly Beauvais.
ZAVATRA NANOTANA NY FIAINAN'ANDRIAMANITRA: Ny taona (1995) tamin'ny fahaterahany dia nahita Nandeha mivantana i eBay ary navotsotra ilay horonantsary ady an'habakabaka an'habakabaka "Brave Heart". Izany koa no taona tamin'ny fitondram-panjakana Indiana nanova anarana ny tanànan'i Bombay hatrany Mumbai.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaran'ny Clement Lenglet Childhood ary ny Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.